Frantsay mampiaraka toerana - maimaim-poana ny mampiaraka ao Frantsa, Holandy mampiaraka
Frantsay mampiaraka toerana — maimaim-poana ny mampiaraka ao Frantsa, Holandy mampiaraka
Malalaka isika zavatra mampiaraka toerana ao Frantsa. Raha toa ianao ka tokan-tena ary ny fitadiavana an-tserasera ny fitiavana ao Frantsa, handray andraikitra mba hiezaka isika amin’izao fotoana izao. Tokan-tena maro any Frantsa dia miandry hihaona aminareo. Tonga soa eto amin’ny Holandy mampiaraka. Hihaona frantsay tokan-tena any am-maimaim-poana ny zavatra mampiaraka toerana. Hahita sy hiresaka amin’ny tokan-tena any am-online frantsay mampiaraka toerana. Hihaona frantsay online fiarahana sy fitiavana maimaim-poana amin’izao fotoana izao.
Hello there aho Eduardo Alvin. Izaho milay sy tsara ny olona iray dia mora ny mandeha ny olona. Efa iray sy ny zanany vavy izy.
Dia tia azy tokoa izany
izy dia ny avonavona. Mino aho fa ny tena fitiavana, fahatokiana. ary. fahadiovam-po, dia ny tena heviny ny fiainana. Tsara tarehy sy mahafinaritra ny olona fa misy olona te-ho Tsara tarehy sy mahafinaritra ny olona fa misy olona te-ho Tsara tarehy sy mahafinaritra ny olona fa misy olona te-ho Tsara tarehy sy mahafinaritra ny olona fa misy olona te-ho Tsara tarehy sy mahafinaritra ny olona izay Hi anarako dia Natalia. Teraka tany Londres, miaina amin’izao fotoana izao ao Parisy. Mikasa hifindra any Pays-bas ao amin’ny hoavy tsy ho ela. Tiako ny daty olona mitovy zavatra tiana. Tiako ny mozika, ny fitandremana ny antonona, ny famakiana, ny fivezivezena, ary ny hetsika sarimihetsika. Aho amin’izao fotoana izao no miasa ho toy ny mpampianatra teny anglisy. Miarahaba, izaho no tsara fanahy sy ny lehilahy mitady ny tsara fanahy sy ny gentlewoman. Izaho dia mipetraka any Frantsa sy ny fitiavana mandeha. toy izany ny hafatra voafetra ihany ny toerana. ny tsara indrindra dia ny manoratra email ho ahy ny eo k. azo inoana aho mafana, malemy fanahy sy be fitiavana vehivavy manana ny hatsarany sy izaho dia manana hery be dia be. Tiako mampihetsi-po sy ny dia lavitra aho mitady ny malemy fanahy sy ny mahafatifaty olona ny taona frantsay mampiaraka: anarana mampiaraka dia maimaim-poana tanteraka ny fiarahana amin’ny tranonkala. Hanatevin-daharana izany zavatra mampiaraka toerana ny daty tokan-tena vehivavy sy ny lehilahy tao Frantsa. Maro frantsay tokan-tena dia miandry mba hitsena anao amin’ny aterineto. Ny fiarahana amin’ny lehilahy sy ny vehivavy ao Frantsa ao ny fanompoana mampiaraka dia maimaim-poana tanteraka. Mba hanatevin-daharana ny iray amin’ireo toerana eo anivon ny hafa Piranesi mampiaraka toerana mba hitsena ny fitiavana tanteraka ny lalao. Handray andraikitra ny fisoratana anarana ho an’ny tena manokana dokambarotra an-tserasera, ary manomboka mampiaraka amin’ny personals any Frantsa
← Hitsena ny vehivavy Hihaona vehivavy ho afaka amin'ny tsara indrindra mampiaraka toerana miteny frantsay
Inona no zavatra ny Vehivavy Tahaka ny - ny Fiarahana amin'ny Zazavavy avy any Frantsa ho avy scopes →